Beesha Caalamka Oo La Shireysa Maanta 5-ta Madaxweyne Gobolleed – XAMAR POST
Beesha Caalamka Oo La Shireysa Maanta 5-ta Madaxweyne Gobolleed
By Mohamed Abdi Last updated Mar 25, 2021
Madaxweynayaasha 5 Maamul Gobolleed & Safiiro ka socda Beesha Caalamka, ayaa lagu wadaa in ay Magaalada Muqdisho ku yeeshaan maanta Oo Khamiis kulan ku saabsan qabsoomida Shirka guud ee Arrimaha doorashooyinka Dalka.
Dhammaan 5 Madaxweyne ee dowlad gobolleedyada, ayaa sida la xaqiijiyey kulanka tegi doona, si looga heshiiyo Ajandaha shirka guud ee Arrimaha doorashooyinka, kaas oo maalmaha soo socda la filayo in uu ka qabsoomo Magaalada Xamar.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Siciid Deni iyo Axmed ayaa horay u diiday ka qayb-galka Shirka Arrimaha doorashooyinka, kadib markii sida ay sheegeen aan lagala tashan ajandaha Shirka oo maalintii Afaraad Farmaajo iyo Maamulada Taageersan Halkaasi ku leeyihiin.
Waxa socda dadaal xooggan oo Wakiilada Beesha Caalamku ay ku doonayaan hirgelinta iyo qabsoomidda shir loo dhan yahay, si heshiis dhammaystiran looga gaaro Arrimaha doorashooyinka dalka.
Ma Cada sida ay ku suurta geli karto,iyadoo Kala aragti duwanaan siyaasadeed jirto,oo hadana Villa Soomaaliya kala jebin ku heyso dhinacyada mucaaradka ku ah.
Jubbaland ayaa daaha gadaashiisa dooneyn in lagu dhameeyo Xal raadinta xasarada Gobolka Gedo xilli shalay Wasiirkii Amniga Jubbaland C/rashiid Janan uu Dawlada Federaalka Heshiis la galay Beled xaawana lagu soo dhaweeyey.
DHAGEYSO: C/qaasim Salaad “Halaga Heshiiyo Khilaafka Doorashada Dalka”